Isbarbardhig: Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6s. | Wararka IPhone
Juan Colilla | | Tartanka, iPhone
Sidaad ogtahay, waxaan goob joog uga nahay Mobile World 2016, dhacdada ugu muhiimsan ee tiknoolajiyada moobiilka sanadlaha ah ee adduunka, iyo daabacaaddan waxaan awood u yeelannay inaan indhaheena ku aragno calaamadaha waaweyn ee suuqa Android (iyo waxyaabo kale oo badan), sidaa darteed waa waqtigii aan waji ka waji u wajihi lahayn taleefanka casriga ee ugu cusub shirkaddayada aan aadka u jecel nahay ee Apple.
Maqaalkan, markaa, waxaan wajihi doonnaa mid ka mid ah calaamadaha suuqa Android, Samsung Galaxy s7, In kasta oo ay jiraan kuwa kale, waxaa ugu wanaagsan in mid mid loo baxo kadibna la isbarbar dhigo dhammaantood si aragti caalami ah oo faahfaahsan looga bixiyo tiknoolajiyada dejin doonta isbeddel ku yimaada warshadaha moobiilka ee 2016, oo aan bilownay xilli dhow.
Marka, waxaan u kala qaybin doonaa iska horimaadkan Samsung Galaxy S7 iyo iPhone 6s qaybo kala duwan, qiimeynta naqshadeynta, ismaamulka, waxqabadka, kaamirooyinka, sofweerka iyo qaar ka mid ah siyaado.
3.1 Sawirka Galaxy S7
3.2 IPhone 6s sawir
4.1 Faahfaahin farsamo
4.2 Natiijooyinka dhabta ah
6 Is dhexgalka
9 Helitaanka iyo qiimaha
Waxaan ku bilaabi doonnaa waxa ugu xiisaha badan, naqshadeynta, markan Samsung wax badan kama beddelin tixraacii sanadkii la soo dhaafay, Galaxy S6 horey ayey u lahayd naqshad ay aad u jeclaayeen iyo tan ugu quruxda badan shirkadda ee shaqadeeda oo dhan, hase yeeshee Galaxy S7 faahfaahin yar ayaa lagu sharraxay, sida in lagu daro qalooca qaar si looga dhigo mid jinsi / caato ah iyo samaynta muraayadaha muraayadaha oo ka hooseeya kii ka horreeyay.
Dhinaca iPhone 6s, naqshadiisu waxay ficil ahaan la mid tahay ta iPhone 6, naqshad sidoo kale si layaableh u shaqaysay oo lagu dhawaaqay inay tahay casriga ugu quruxda badan adduunka ee loo yaqaan 'Wall Street Journal'.
Isbarbar dhigooda waxaan arki karnaa in iPhone 6s uu khafiifsan yahay, inkasta oo Galaxy S7 uu ku dhawaad ​​labanlaab yahay awoodda batteriga.
Dhinac kale oo ahmiyad gaar ah aan siineyno markaan soo iibsaneyno qalab waa ismaamulkiisa, markanna waxaa jira kala duwanaansho wanaagsan, sidii caado noqotay, ee udhaxeysa iPhone iyo calanka Android, waana tan ilaa hada in iPhone uu leeyahay hufnaan aad u wanaagsan (xiriirka ka dhexeeya isticmaalka tamarta iyo waxqabadka), Galaxy S7 wuxuu leeyahay batari 3.000mAh ah taasi waxay kudhowaad laba jibaartaa awooda a iPhone 6s oo leh 1.715mAh, tanina waxay siineysaa madax-bannaani weyn.
Farqiga ayaa sidoo kale magdhow ah in Galaxy S7 ay ka dhigeyso isticmaalka weyn ee batteriga iyada oo la dhaqaajinayo shaashad sare oo xallin ah, xuddun badan iyo xitaa qaar ka mid ah dareemayaasha aan iPhone lahayn, in kasta oo tan ay tahay is-xukunka ugu dambeeya ee aaladda ayaa ka sarreeya tan iPhone 6s.
Qeybtaan, barta waxaa qaata Galaxy S7.
Qeybaha kaamirooyinka ayaa ah waxa sida aadka ah indhahayga u soo jiitay daabacadan Mobile World Congress, waana taas inkasta oo aysan jirin hormar weyn oo laga sameeyay baytariyada, processor-rada ama qeybaha kale, sanadkan waxaa jira shirkado badan oo ay diiradda saarayaan sawir, iyo halkan labada Galaxy S7 iyo iPhone 6s heli sawiro aad ufiican.
Shakhsiyan waxaan mudnaan u lahaa inaan awood u yeesho inaan labada kamarad ku rido imtixaan isku dhacdo, isla xaalado isku mid ah, natiijaduna waa wax laga fekero, laakiin sida qaybta naqshadeynta, markan waan kuu ogolaan doonnaa adiga garsooraha sawirada oo dooro taleefannada casriga ah ee iyaga ka dhigaya kuwa wanaagsan (caruusadda aan ka qaaday sawirka waxay ahayd buluug khafiif ah).
Sawirka Galaxy S7
IPhone 6s sawir
Jiilkan cusub ee qoyska Galaxy, Samsung waxay ku dhaqaaqday "tilaabo gadaal" ah oo ku saabsan warqad iyadoo dib loogu noqonayo 12 Mpx kamaraddeeda dambe oo ka timid 16 Mpx ee Galaxy S6 uu lahaa, hase yeeshee tani waxay caddeyn u tahay megapixels maahan wax walba kamarad iyo hoos u dhigista surwaal Samsung ah oo markii ugu horreysay ka tagaya lambarrada si ay macaamiishooda u siiyaan tayo wanaagsan.
Tani si kastaba ha noqotee ma xuma, waa wax aad u wanaagsan adiga oo doonaya inaad iibsato Galaxy S7, maaddaama kamaraddeeda dambe ay qaaddo sawirro aad u wanaagsan oo ay ugu mahadcelinayaan dareemahooda Teknolojiyada laba-geesoodka ah taas oo kuu ogolaaneysa inaad si deg deg ah diirada u saarto.
Laakiin maxaan kuu sheegeynaa, qaybta kamaradaha ayaa si ficil ahaan ah looga khafiifiyay Apple, farsamada Dual Pixel waxay aad ugu egtahay tan Apple soo bandhigtay, Pixels diirada, Mpx kaamerada ayaa loo ekeysiiyay kuwa iPhone 6s oo sidii oo kale aysan ku filneyn, qaabab cusub ayaa lagu soo daray kaamirada, mida ugu horeysa waxaa la yiraahdaa HyperLapse (Waqti-lumis aad u xasilan oo xasilloon) midda labaadna iyaga ayaa loo yaqaan Sawir Sawir ah, taas oo aan ka badnayn khayaamaynta Sawirada Live, taasina waa in kamaradu qaadan doonto 3 ilbidhiqsi ka hor intaadan sawir qaadin waxayna u keydineysaa sida fiidiyoow sawir wali socda.
Hadda, haddii wax aan si fiican u qabtay Samsung oo aan Apple ku jirin qalabkan waa in lagu daro xasilinta muuqaalka muuqaalka labada moodelba (Galaxy S7 iyo S7 Edge), tani waa wax run ahaantii shaqeynaya oo ka dhigaya kuwa naga mid ah oo aan wadnaha wadnaha wadnaha xanuunsaneyn marka ay timaado sawir qaadista.
Way adag tahay in la magacaabo qaybtaan, khadadkaas waxaan isku barbardhigeynaa qaababka CPU + GPU + RAM si aan u aragno kan ugu fiican warqadda iyo wixii ka baxsan.
Galaxy S7 wuxuu ku imaan doonaa labo nooc oo kala duwan, midna Snapdragon 820 iyo mid kale oo leh Exynos 8890, noocyadan way kala duwanaan doonaan waxayna kuxirantahay suuqa aan ka iibsanayno, hadii wax walbana ay kusii socdaan sida lagu dhawaaqay, suuqa Yurub (anaga) waxaan haysan doonaa nooca uu ka kooban yahay Exynos 8890.
Galaxy S7 oo leh Exynos 8890 waa taleefan casri ah oo leh a 14nm SoC ka kooban a Octa-Core processor (sida caadada u ahayd casriga casriga ah ee Android) oo leh qaab dhismeed gelinno 64 iyo tikniyoolajiyadda weyn.LITTLE (4 waxqabadka hooseeya iyo 4 geesood oo waxqabad sare leh oo isbeddelaya iyadoo lagu saleynayo baahiyaha), 4GB oo LPDDR4 RAM ah (ma ogin haddii Dual-Channel), iyo a ARM Mali-T880 GPU, GPU-ga ugu casrisan uguna awooda badan ee ka socda ARM.
Lambarada Samsung ayaa leh kuwa soo socda; a 30% processor dheereeya, hal 64% dhakhso GPU iyo 1GB dheeraad ah oo RAM ah, waxaas oo dhan marka la barbar dhigo Galaxy S6, oo lafteeda lafteedu ahayd aalad awood badan.
IPhone 6s si kastaba ha noqotee wuxuu leeyahay a 14 / 16nm SoC ka kooban a Apple A9 Dual-Core processor leh naqshadaha gelinno 64, hal PowerVR GT7600 GPU y 2GB oo LPDDR4 RAM ah en Laba-Channel (Tani waa muhiim maadaama ay labalaabineyso marinka ballaadhin ee xusuustaan).
Marka loo eego tirooyinka ay iska leedahay shirkadda Apple, ayaa Processor waa 70% iyo 90% dhakhso GPUs marka loo eego kuwii hore (oo lagu soo daray jajabka A8), oo laga fikiray isticmaalka dhabta ah ee aan siinno qalabka.
Natiijooyinka dhabta ah
Hadda waxaan ognahay faahfaahinta farsamada, markaa waa waqtigii la isbarbar dhigi lahaa natiijada tilmaamahan fool ka fool, imtixaanka ugu fiican, AnTuTu Benchmark ee nooca 6.
Haddii aad isweydiiso sababta xulashada cabbirkaan, jawaabtu waa mid aad u fudud oo ka kooban laba qaybood:
Meesha Samsung taagan ma tijaabin karin halbeeg kale oo aan kan ahayn, waa midka kaliya ee ay noo rakibeen.
Si ka duwan GeekBench (kaas oo cabiraya awooda guud ee qalabka adoo u qaadanaya ugu badnaan), AnTuTu Benchmark wuxuu cabiraa habdhaqanka tan xaaladaha nolosha dhabta ah sida farsamaynta waqtiga dhabta ah sawirada, khibrada isticmaale, maaraynta shaqooyin badan, iwm.
Kahor intaadan ku tusin natiijooyinka, waa inaad ogaataa in qalabka aan tijaabinay uu ahaa midka ay ku jiraan Exynos 8890 (waa isku mid Spain lagu iibin doono), in labada aalad lagu tijaabiyey isla shuruudo isla markaana in tijaabooyinka garaafka ah ee AnTuTu sameyso ay ka mid yihiin tijaabooyinka Offscreen ee 1080p si loo cabbiro Waxqabadka GPU dhammaan waxyaabaha kale ee loo siman yahay wax kastoo ay tahay xallinta guddiga ku dhejinaya qalabka.
Sida aad ku arki karto sawirka ereyadan, waxqabadka labada aaladood aad bey u siman yihiin, hase yeeshe iPhone 6s wali 3.000 dhibcood ayaa ka horeysa, wax si dhib yar looga mahadcelin karo nolosha dhabta ah, laakiin taasi waxay in badan ka sheegaysaa aaladda iyada oo lagu daro warqad astaamo u muuqda kuwo lagu qosli karo marka loo eego kuwa Galaxy S7.
Muuqaalka kaliya ee Galaxy S7 ka fiican yahay iPhone 6s ayaa ku jira RAM, tanina waa sababta oo ah waxay macno ahaan labanlaabaysaa qadarka RAM ee rakibay.
Ujeeddada qaybtaan maxaa yeelay iPhone 6s ayaa qaata kor joogida sida qalabka ugu awooda badan.
Qaybta shaashadda, waxyaabo ayaa ku adkaada dadka isticmaala iPhone, in kasta oo ay run tahay in shaashadda iPhone 6s ay tahay mid dhalaalaysa, fiiqan oo aad u wanaagsan, shaashadda Galaxy S7 ayaa leh qaraar QuadHD taas oo aad uga fog ta iPhone 6s (waxyar ka sareysa HD 720p), tan ayaa lagu daray 5'1 ″ horteeda 4'7 ″ ee iPhone 6s ayaa nooga tagaya guuleyste cad oo arrintan la xiriira, gaar ahaan ka dib marka la barbardhigo cufnaanta pixel ee 577 ppi Galaxy S7 iyo vs. 326 ppi ee iPhone 6s.
Samsung waxa kale oo ay dooratay Muujinta La-qabsiga, oo ah qaabka shaashadda ay ku sii socoto in yar oo muujinaya macluumaad sida waqtiga, taariikhda ama kalandarka iyada oo la isticmaalayo qayb aad u yar oo ka mid ah baytariga, shaqsiyan ma jecli laakiin waa wax noqon kara waxtar leh.
Meeshii Samsung horeyba loo caleemo saaray ugana tagayso Apple dhulka (xagga shaashadaha) waxay ku jirtaa tikniyoolajiyadda iyaga ka dambeysa, waana taas in teknolojiyadda OLED ee ka dambeysa kumbuyuutarrada Galaxy S7 ay ka sarreeyaan IPS LCD-ka ay adeegsato Apple ee ku jirta iphone-keeda, labaduba waa joogaan faa iidooyinkooda iyo khasaarahooda, laakiin labada shirkadoodba way ogyihiin in OLED looxyada ay ku guuleysteen dagaalka, gaar ahaan marka la eego matalaadda midabada sida madow, halkaasoo ay OLED bangalooyinku u dhigmin.
Qeybtaan, barta waxaa loogu talagalay Samsung Galaxy S7.
Isdhexgalka aaladahayagu waa qodob tixgelin siinaya, Apple-kaniina wuu ogyahay sida wax loo cusboonaysiiyo, waxay ahaayeen kuwa si sax ah u soo saaray taleefankii ugu horreeyay ee leh shaashad taabasho badan, taleefankii ugu horreeyay ee leh aaladda sawirka faraha oo hadda ah kan ugu horreeya taleefannada casriga ah ee awood u leh inay ogaadaan oo keliya dhowr taabasho oo isku mar ah isla mar ahaantaana kumbuyuutarradooda laakiin sidoo kale cadaadiska saaran.
Galaxy S7 wali ma aragno tiknoolajiyad la mid ah 3D Touch, oo mar hadaad tijaabiso cabirka sadexaad, 2da cabir waxay kuugu muuqdaan caajis.
Waxaa la filayaa in moodooyinka mustaqbalka dhammaan shirkadaha ay ku dari doonaan tiknoolajiyad tan la mid ah, sidaas darteed iyo hormuud ahaan halkan barta waxaa ku qaatay iPhone 6s.
Qaybtani waxay inyar kuxirantahay naqshadaynta sidaa darteedna waa qayb kuxiran dhadhanka midkasta. Labada qalabba waxay leeyihiin waxyaabo loo tixgeliyey inay yihiin "Premium", dhammeeya wanaagsan iyo qalab aan caag ahayn oo qalabka siiya dareen tayo iyo xoog leh.
IPhone 6s wuxuu ka kooban yahay muraayad hore oo muraayad ah oo lagu daaweeyo habka loo yaqaan "Laba isweydaarsiga ion"Tani waxay siineysaa iska caabin aad u wanaagsan labada kuus iyo xagasho labadaba sidoo kale waxay u ogolaaneysaa in si joogto ah loo cadaadiyo si ay ula falgalaan 3D Touch.
Dhabarkeeda ayay ku leedahay 7.000 aluminium taxane ah, Nooc aluminium aad u adkaysi badan oo loo isticmaalo warshadaha aerospace, kaas oo leh dhumucdiisa hooseeya ayaa u baahan ilaa 90 Kg xoog leh in la fooraro
Dhinaca kale, Galaxy S7 wuxuu ka kooban yahay nooc ka mid ah aluminium aan la garanayn (uguyaraan wax war ah kama hayno) qaabkiisa oo dahaarka hore iyo gadaasha jiilkii ugu dambeeyay ee Gorilla Glass, nooca 4, galaas aad u adkeysanaya xagashada iyo kuuskuusyada, oo leh qaab xoogaa qalooca.
Dhanka iska caabinta, labada aaladoodba si siman ayey uwada siman yihiin, si kastaba ha noqotee waxaan dooran lahaa inaan doorto Galaxy S7 maadaama guuleystaha la siiyay in dhumucdiisu ka sareyso tanina waa inay keentaa xoog badan, iyo dabcan maxaa yeelay waxay leedahay Shahaadada IP68 taas oo dammaanad qaadaysa hawlgalkeeda xitaa qoto dheer oo ah 1 mitir nus saac.
Sidaa darteed Waxaan qodobkan siinayaa Galaxy S7 shahaadadeeda IP68 iyo xooggeeda.
Xuquuqda qaybtan Samsung waxay heshay fursad aad u muhiim ah oo ay seegtay, taasna waa in Samsung Galaxy S7 uu leeyahay boos dheeri ah oo ku jira sagxaddiisa SIM si loogu daro a MicroSD, tan oo ay weheliso shaqada cusub ee Android Marshmallow taas oo u oggolaaneysa isku-darka xusuusta gudaha ee qalabka la midka dibedda ah uu gaari karo in Galaxy S7 ee 32GB ay ku dhammaato in ka badan 200GB booska la heli karo, hase yeeshe Samsung waxay leedahay sabab ay ku diiddo shaqadan, waana taas haddii tan la sameeyo, MicroSD-ka la isticmaalay looma adeegsan karo wareejinta faylasha, ma aqrin karto aalad kale oo aan ka ahayn Galaxy S7 oo ay tahay ku xidhan
Tani waxay bixisaa faa'iidooyin iyo khasaarooyin, maaddaama faa'iidada ugu weyni ay tahay suurtagalnimada in la dheereeyo kaydinta aasaasiga ah ee aaladda oo ka durugsan wixii ku jiray markii hore, inkasta oo ay khasaaro tahay looma isticmaali karo ujeedo kale taasi ma aha keyd gudaha ah ee Galaxy S7 (illaa aan ka xirno oo aan qaabeyno mooyee).
Iyada oo leh Galaxy S7 maxaa yeelay iyada oo lagu daro MicroSD waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya in lagu keydiyo faylasha, sinaba looma rakibi karo codsiyada, warka wanaagsan ayaa ah in tan si sahal ah loogu sixi karo cusbooneysiin software ah, iyo waxa ugu macquulsan ee Samsung waxay noqon kartaa in loo ogolaado adeegsadayaasheeda inay doortaan sida ay u doonayaan inay u isticmaalaan MicroSD.
Asal ahaan, Galaxy S7 ayaa lagu iibiyaa 32 kaydinta iyo suurtagalnimada adeegsiga MicroSD si loo keydiyo faylasha iyo dukumintiyada, halka iPhone 6s lagu iibiyo 16, 64 iyo 128GB iyada oo aan suurtagal ahayn in MicroSD la isticmaalo.
Waxaan siinayaa barta iPhone 6s sabab fudud, Samsung waxay kaa xadideysaa 32GB Kaydinta codsiyada adoo haysta hal nooc oo aan kuu oggolaanayn inaad ku milmaan kaydintaada MicroSD, tani waxay muujineysaa in marka 32GB (oo nidaamku ka yaraanayo) ay ka buuxaan codsiyo, ma awoodi doontid inaad rakibatid wax intaas ka badan . Dhanka kale, iPhone 6s, inkasta oo aanan ku dari karin MicroSD, waxaa jira xulashooyin noo oggolaanaya inaan ku keydinno feylasha iyo dukumiintiyada warbaahinta laga saari karo sida SanDisk iXpand, USB ku xirma hillaaca, aasaas ahaanna waxaan ku iibsan karnaa qalab ilaa 128GB codsiyadayada.
Muhiimadu waa iPhone 6s Waa hagaag, illaa Samsung ay saxdo oo u oggolaato adeegsadaha inuu doorto haddii uu doonayo inuu ku biiro MicroSD-kiisa iyo keydinta gudaha.
Inkasta oo tani aysan ahayn qodob ka mid ah taleefanka laftiisa, haddana waa wax ay tahay in la xuso marka isbarbardhig la sameynayo, waana inay yihiin laba taleefan oo casri ah oo suuqa ku soo galay waqti qaldan.
Dhinac waxaan ka leenahay iPhone 6s in la sii daayay on the Oktoobar 9 (gudaha Isbaanishka), qaababka 2 (iPhone 6s iyo 6s Plus) iyo 3 ikhtiyaarrada kaydinta (16, 64 iyo 128GB), qiimaha ayaa laga bilaabay saldhig ilaa maanta taagan, 749 € moodalka 16GB, € 859 ee 64GB iyo € 969 ee 128GB. Iyada oo leh iPhone 6s Plus sheygu waa isku mid, kaliya waa inaad kudartaa € 100 xiriir kasta oo walaalkiis yar.
Dhinaca kale, Galaxy S7 waxaa lagu iibiyaa 2 nooc oo leh hal ikhtiyaar oo kaydinta ah (oo la ballaarin karo * iyadoo la adeegsanayo kaarka MicroSD) oo ah 32GB, 7GB Galaxy S32 Qiimaha 719 € iyo 7GB S32 Edge oo ah 819 XNUMX, oo laga heli karo Maarso 11 (Spain).
Halkan qofna ma helayo wax dhibco ah, waa qayb macluumaad kaliya ah.
Qeybtaan ma jiri doonaan dhibco, waa laba nidaam oo kala duwan, mid walboo leh faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa, iyo gaar ahaan mid waliba iyadoo loo eegayo nooca adeegsadayaasha.
Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in labada nidaamba ay horay u socdaan, aaladaha aan wajaheynona ay ka mid yihiin, marka waxaan jeclaan lahaa inaan xoojiyo dhinacyada qaar ee waxtarka leh ee la socday soo saarida qalab kasta.
IPhone 6s iyo IOS waxaan ku arki karnay sida iOS 9 ay u soo bandhigeen shaqooyin ay ka mid yihiin ReplayKit oo kuu ogolaaday inaad duubato cayaarahaaga la ciyaaray, howsha "Hey Siri" oo na siineysa xoriyad weyn oo aan kula falgalno qalabkeena, iyo ugu dambeyn 3D Touch iyo toobiyeyaasha markaad riixayso codsiyada, horudhaca xiriiriyeyaasha, sawirrada iyo emayllada, menusyada waxqabad ee la heli karo iyo waxyaabo kale oo badan.
Iyadoo macruufka 9 iyo iPhone 6s awood u leh inay sameeyaan Sawirada Live inaad si qurux badan u qabato daqiiqadaha ugu muhiimsan noloshaada, sidaasna ku muujineysa in taleefankaaga casriga ahi yahay wehelkaaga aaminka ah meel kasta oo aad tagtid iyo in shaqooyinkeedu ay nolosha ka dhigayaan mid fudud, ka mahadcelin iyo guud ahaanba ka wanaagsan.
Iyadoo Galaxy S7 iyo Android Marshmallow waxyaabo badan ayaa sidoo kale la soo saaray, oo ay ku jiraan nidaamka lacag bixinta mobilada Samsung Pay inaadan u baahnayn POS leh NFC si aad lacag u bixiso ama Launcher Game, oo ah nidaam maareyn ciyaarta ciyaarta oo dhammeystiran oo kuu oggolaaneysa inaad hagaajiso nidaamka marka aad ka bilaabayso ciyaaraha fiidiyowga Sanduuqa Ciyaarta (galka si otomaatig ah isu soo dhoweyn doona) oo xitaa sameeya ficilo gaar ah oo dhexdooda ah sida dhaqaajinta a ha khalkhal gelin, shaashadda duubista, qaadashada shaashadda iyo xitaa xiritaanka badhamada taabashada aaladda si aanan si kama 'ah uga tagin ciyaarta. .
Shaki la'aan labada nidaamba waxay keeneyaan warar badan oo dheeri ah oo ka baxsan kuwa halkaan lagu xusay, sikastaba kuwani waxay umuuqdeen inay sifiican ugahadlayaan labada dhinacba, waana sababta aan kuugu dhiirigalinayo inaad ku sharaxdo faallooyinka shaqada aad ugu jeceshahay nidaam kasta, had iyo jeer si edeb leh oo xushmad leh, mid Android ah iyo mid iOS ah, sababtoo ah nidaamyo kaladuwan, midkoodna kama fiicna midka kale, waana jiritaanka tartame ka dhigaya nidaamka aan jecel nahay (ha ahaado Android ama macruuf) ha la hagaajiyo sannad kasta si loo sii wado.
Labada aaladoodba way siman yihiin, labadaba qalab ahaan iyo naqshad ahaanba, iyagoo leh laba aaladood oo isku mid ah, ma dooran kartid guuleyste cad, halkan mid waliba waa inuu ku buuxiyo ra'yi-ururintooda ra'yigooda oo marka dambe lagu daro qodobbada aad arki karto keebaa guuleysta, Tan awgeed waxaan awood u siineynaa codbixintii ugu dambeysay ee hoose si qof walba uu u codeeyo dhammaadka taas oo uu ku guuleystay, sidaan ayaan ku heli karnaa aragti wanaagsan oo ah aaladda ay dadku aad u jecel yihiin.
Sharaxaad kasta oo ku saabsan codkaaga ama ra'yi kasta oo ku saabsan aaladaha, waxaad aadi kartaa faallooyinka maqaalka, waxay noo noqon doontaa farxad inaan aqrino fikradahaaga kala duwan ????
DHEERAAD AH: Haddii ay dhacdo in sawir aanu kuu qalmin, sawirrada maqaalkan ku jira waxaa la sameeyay iyagoo isku daraya iPhone 6s iyo Galaxy S7, kuwa soo baxa kuwa ugu iftiinka badan waa kuwa iPhone 6s (labada kamaradoodba waxay ahaayeen qaab otomaatig ah).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Isbarbardhig: Samsung Galaxy S7 vs iPhone 6s
Tayada sawiradu waa nasiib daro. Miyaadan lahayn toosh toos ah? Sidoo kale qoraallo badan oo aan waxba laga oran oo aad hore u daabacday. Isbarbardhiga kamaradda oo leh hal sawir? WTF !!!
Dhammaan sawirada ku jira shayga waxaa lagu sameeyay iyadoo la isticmaalayo labada aalad, waxaana lagu sameeyay sanduuqa nalka 🙂
Aniga ahaan waxaa jira guuleyste cad oo shaki la’aan waa iPhone. Xagga tijaabada kamaradda, horey ayaan ugu sameeyay isla natiijadaas, Samsung waxay badashaa midabka dhabta ah ee sawirka (mararka qaarna kani wuxuu cajab galiyaa dadka aan aqoon), halka iPhone-ku uu sawir fiican kaqabto midabbada dhabta ah. Qodob kale oo u muuqday mid muhiim ah in la muujiyo ayaa ah kan nidaamyada hawlgalka. Waxaan u maleynayaa in haddii ay isbarbar dhigayaan maadaama 2-da ay yihiin nidaamyo shaqeynaya oo u qalma dib u dhigista, xaqiiqda ka duwanaanshahana ay tahay waxa ka dhigaya HAA inay isbarbar dhigi karaan, waxay la mid tahay haddii aan niri ma barbar dhigi karno 2 nooc oo liin ah oo ma go'aansan karno midka fiican adoo tixraacaya Tusaale ahaan, markaan iri tan, waxaan u maleynayaa in macruufka marwalba ka fiicnaado Android. Salaan!
Aniga ahaan, isla shaqada Alcatel qiimo jaban ayaa kafiican.
Boggan waxay umuuqataa in DHAMMAAN dadku ka faalloodaan kaliya inay dhaleeceeyaan ....
Aan aragno, way fiicantahay in tan loogu yeero iPhone News, laakiin waxaad ku bixisay afar magaalo isbarbardhiga. Aniguna waxaan kuhadlaa aqoon badan ama kayar xaqiiqda maxaa yeelay waxaan haystay Galaxy S6 iyo iPhone 6S Plus. Waxyaabaha iila muuqda inaysan ila qummanayn:
Camera: Halkan Samsung waxay eegaysaa iPhone-ka. Apple wax badan kama aysan hagaajin kamaradda 6 ilaa 6S. Okay, Android ayaa ka dambeysay, laakiin intii u dhaxeysay sanadkii hore iyo sanadkan, waxay qaadeen tallaabo aad u ballaaran. Waa run in Samsung ay dhigeyso wax badan oo dib-u-eegis ah iyada oo la kordhinayo faahfaahinta iyo xajmiga oo mararka qaarkood ka tagaya sawirrada gebi ahaanba burburay, laakiin kamaraddu wali way ka fiican tahay.
Waxqabadka: Waxaan xooga saari lahaa Apple. Sida laga soo xigtay GeekBench, A9 wuxuu aad uga sarreeyaa SoC-da sannadkiisa, kanna wali si muuqata ayaa uga awood badan Snapdragon820. Apple waxay shaqo weyn ka qabatay A9-ka waxayna isku dhigtay boos xitaa sanadka oo dhan ay adagtahay in la gaaro. Muuji in GeekBench ay ku siinayaan 2400 ~ 2500 dhibcood hal xudun, iyo in tijaabada ay ku saleysan tahay xaqiiqda ah in 2.500 dhibcood ay yihiin waxqabadka Intel i5-2550k CPU, taasoo u dhigeysa ku dhowaad kala bar dhibcaha Galaxy S6.
Kaydinta: Tag maro aanad siinin barta Samsung marka ay leedahay microSD. Maxaa diidaya in la dheereeyo keydinta? Hagaag, iPhone xitaa ma ogola microSD waana tan isbarbar dhig, sax?
Hello Jordi, waad ku mahadsan tahay faallooyinka, aan kuu sharaxo qiimeyntayda;
Kamerada: Halkan natiijada ayaan kuu dhaafey, akhristayaasha, waxaan ku sharaxay astaamaha kamarad walba aqristayaashuna waxay muujiyeen in sawirka iPhone 6s uu ka fiican yahay aragtidooda (iyo tayda, wuu ka sii iftiimayaa waana aniga Waxaan kuu xaqiijinayaa in midabku uu yahay mid soo kabasho badan), waxa kaliya ee ku saabsan Galaxy S7 ee aan ku dari lahaa iPhone 6s waa OIS.
Waxqabadka: Ku guuleystaha wuxuu ahaa iPhone 6s, way dheer tahay in la sharaxo laakiin waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobo, GeekBench wuxuu sameeyaa tijaabo walwal ah isagoo SoC ku tijaabinaya howlaha culus, tani waxay siineysaa dhibco illaa inta qalab aadi karo, haddii waad fiirineysaa, isbarbar dhigeysaa aaladaha kala duwan ee qalabka Android, halka loo yaqaan 'Single Core' ama 'mono core' ayaa had iyo jeer ka sarreysa iPhone-ka halka Multi Core ama Multi Core ay ka sarreeyaan taleefannada casriga ah ee noocyada kale ah (maaddaama ay processor-yada iPhone-ka yihiin Dual-Core) , ugu yaraan dhammaan kuwa maanta la iibinayo, halka tartanka ay badanaa yihiin Octa Core, in kasta oo mararka qaar ay ku jiraan laba koox oo 4 gees ah), halka AnTuTu Benchmark waxqabadka aaladda lagu qiimeeyo nolosha dhabta ah, jaangooyada Imtixaanadu waxay ku shaqeeyaan hawlo badan, waxqabadka CPU cadaadiska, waxqabadka muuqaalka GPU ee waxqabadka waqtiga dhabta ah (taas oo u dhiganta ciyaarista fiidiyowga), khibradda isticmaalaha, iwm.
Dhammaan tani waxay ka dhigeysaa AnTuTu Benchmark tijaabo aamin ah oo ku saabsan waxqabadka qalabka, taas oo inkasta oo ay run tahay inay tahay tan ugu fiican hadda, waa in la aqbalaa in 3.000 oo dhibco aysan badneyn iyo in Samsung labadaba ay leeyihiin Exynos 8890 iyo Qualcomm oo leh Snapdragon 820 waxay qabteen shaqo qurux badan.
Kaydinta: Waa wax aad u fudud, SD-yada Galaxy S7 oo ma awoodi doontid inaad ku rakibtid codsiyada, Galaxy S7 waxaa lagu heli karaa oo keliya nooca 32GB halka iPhone-ka uu ku jiro moodooyinka 64 iyo illaa 128GB, xaddidan Galaxy S7 ilaa 32GB Of apps, waxaan ku adkeysanayaa, haddii Samsung ay wax ku saxdo cusbooneysiin, waxay qaadan doonaan barta in ka badan intii ku filneyd, maanta waxqabadka Galaxy SD waxaa lagu heli karaa iPhone oo leh qalab sida iExpand ah.
Ii oggolow inaan ku kala duwanaado arrinta kaydinta, markay ka hadlayaan in SD uusan awood u yeelan karin inuu sameeyo mid dhan ama uusan awood u yeelan doonin inuu ku milmo xusuusta gudaha ee aaladda, macnaheedu maahan inaadan dhaqaajin karin codsiyada qaarkood ilaa xusuusta SD sida hadda la sameeyo iyo dhowr moodal ka hor, salaan!
Jawaab Manuel Rincon
IPhone-ku wuxuu ka bilaabmayaa xumaanta 16Gb
Ku jawaab CanarioST
Anigu waxaan ahay sawir qaade u heellan, waxaan u arkaa sawirka Galaxy s7 mid ka fiican maxaa yeelay sawirka iPhone-ka ayaa umuuqda mid aad loo kashifay, aad u cad ama gubtay.
Maqaal wanaagsan iyo gabal isbarbardhig ah.
Aad baad u mahadsantahay 😀
Isbarbardhig aad u wanaagsan. Ujeeddo aad u adag waxayna umuuqataa inay shaqeysay, iyadoo xog dhab ah iyo qeexitaanno sax ah. Hambalyo
Jawaab Pablo BG
Waad ku mahadsantahay ereyadaada Pablo, waxaan rajeynayaa inaad ka heshay ^^
Waxaan hayaa labada qalab midkoodna sida ugu fiican u shaqeeya waa Galaxy S7. IPhone 6s wuxuu i siiyaa dhibaatooyin ku saabsan emaylka, isku xirka kalandarka google, Muusiggu ma shaqeynayo iyo waxa iga careysiiya ma awoodo inaan ku rakibo barnaamijyo ka baxsan appstore-ka
Qiimeynta barnaamijka xilligan, waxaan u maleynayaa in IOS ay ka dambeyso Android, sababtoo ah xaqiiqda fudud in kastoo IOS qaababkeedii ugu dambeeyay ay hirgalisay horumarin badan, haddana wali way ka fog tahay dabacsanaanta ay Android bixiso, arrimaha sida sida ogeysiisyada, iswaafajinta feylasha iyo qaababka fiidiyowga, maareynta faylka, qulqulka fiidiyowga iyo muraayadda TV-yada casriga ah iyadoo aan la helin dadaal badan sida ay sameyso Android, iyo dheer iwm, qof kastaa wuu ogyahay in qof kasta oo wata Android oo tagaya IOS uu dareemayo inuu yahay luminta shaqooyinka iyo waxyaabaha kale, xitaa waa qasaaro hadii aan sameyno Jailbreak, softiweer kastaa wuxuu leeyahay faa iidooyinkiisa iyo qasaarooyinkiisa laakiin waxaan u maleynayaa in xilligan faa iidooyinka Android ay ka culus yihiin qasaarooyinka, sanadkan Apple waa inay qaadataa boodbood tayo leh oo muhiim ah hada tartanka (Android ) wuxuu fulinayaa sifooyin muhiim ah oo aad u faa'iido badan, salaan!
milicsiga ugu fiican ee android aan abid maqlay!
Waxaan isticmaalaa S6 iyo iPad, mana jiro midab, macruufka waa mid dhab ah oo OS sax ah oo wanaagsan oo adag oo adag oo xiran ...
Android waa waxa shaqadiisu ahayd markii uu yaraa, madadaalo furan oo furan oo leh fursado kugu hareeraysan oo mobayl ah ...
adoo ku isticmaalaya kaliya wadista adag ayaa leh wax badan…. muusikada u dhig sidii ay tahay pendrive, i sii gudbi barnaamijyadooda galka oo rakib markasta oo aan rabo inaan ku xirnaado tv-ga ama aan la socdo PS4…. android waa ilmaha iyo IOS waa awoowe.
Waan jeclahay labadoodaba wax badan, laakiin waa inaan dhahaa marka Android la joogo waxaan haystaa fursado badan oo aanan ku arki karin oo keliya inaan haysto taleefanka gacanta oo leh kamarad.
Haa Juan, Aad baad ugu mahadsantahay isbarbardhiga. Waxay ila tahay aniga mid aad u faahfaahsan oo ujeeddo leh. Raac qadkaan 😉
Waxaan rabay inaan wax kaa weydiiyo calaamadaha astaanta 'AnTuTu'. Markii aan iibsaday iPhone 6S Plus waxaa igu soo dhacday inaan rakibo AnTuTu si aan u arko dhibcaha ay heshay ... maalinteeda waxaan arkay ilaa 80000 waana intaas, dhammaantoodna si aad u wanaagsan ... xaqiiqadu waxay tahay, markaad akhrinaysid maqaalkaaga iyo markaan arkay dhibco dhan 133000, I Waan burburay tan iyo intii ay ka fogayd kuwa aan xasuustay. Waxaan bilaabay inaan internetka ka raadiyo runtiina, dhamaan goobaha waxaa ku yaal 120000-130000 oo dhibco ah, sidaa darteed waxaan mar kale ka gudbay AnTuTu dhibcaha wuxuu ahaa 86893 iyo kala goynta dhibcaha waxaan ku arkay jadwalka isbarbar dhiga halka dhibcaha RAM iyo 3D (Beerta iyo Marooned) aad ayey isugu egyihiin (in kasta oo 10% ay ka hooseeyaan qalabkeyga), dhibcaha CPU iyo UX, dhibcaha ayaa qiyaastii kala bar ah dhammaantood. Marnaba kamaan cawanin waxqabadka iphone-kan, laakiin dabcan… waxaan ka imid Iphone 4S boodkuna aad buu u weynaa, laakiin waxaan ka walaacsanahay dhibcahaan hooseeya. Ma aqaano wax ku saabsan arrimo saameyn ku yeelan kara calaamadda calaamadda '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 'Fad' Fad ',' '' '' markaa '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
Salaan Jorge, waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga, waxaan kuu sheegayaa:
Markii hore AnTuTu waxay siisay iPhone 6s dhibic dhan 90.000 ama wax la mid ah, markii dambe waxaa loo cusboonaysiiyay nuuca ay tahay 6.0 (Codsiga AnTuTu) oo dib loogu cusbooneysiinayo qaabkan uu u calaamadeeyay aaladaha, laga bilaabo xilligaas iPhone 6s wuxuu lahaa 130.000 oo dhibic oo ka badan ama ka yar.
Taasi waxay tiri, hubi inaad dalabkaaga u cusbooneysiisay nooca ugu dambeeya (v6.0), ka dib markaad tan sameyso, xir dhammaan codsiyada oo dib u bilow qalabka, ku xir oo isku day inaad dib u sameyso imtixaanka, ii sheeg natiijooyinka cusub si aan u arko haddii la xallinayo 😀
Su aalo kasto faallo ^^
Aad baad ugu mahadsantahay Juan jawaabtaada degdega ah. Hagaag, waan awoodi doonaa in aan mudo sameeyo waxaana kuu sheegayaa natiijada
Dhamaan wanaag. 🙂
Hagaag, waad saxneyd, hada waxay dhalisay 132757. Gabagabadii markaa ... ma loo baahan yahay in dib loo bilaabo qalabka waqti ka waqti?
Aad baad ugu mahadsan tihiin wax walba iyo salaan qaali ah.
Sidayada oo kale, iyagu waxba kuma yeelaan inay seexdaan waqti ka waqti 😛 Waan ku faraxsanahay inaad xallisay dhibaatada 😀
Dabcan iPhone-gu wuu guuleysan doonaa, halkani waa meel ay Apple taageere u yihiin, marka la eego waxqabadka dabcan iPhone-ka ayaa guuleysan doona, wuxuu leeyahay qaraar hoose ..., izombie, wax walba kuma dul wareegaan Apple iyo Samsung, waxaa jira kooxo horeyba uga fiicnaa kuwa kaliya oo aan ku bixin suuqgeyn sida ay iyagu sameeyaan, nolol raadso.
Adigu ma tihid taageere Apple oo halkan ayaad timid oo waad ka codeyn kartaa doorashooyinka, haddii aad eegto iPhone 6s ma helayo 100% codadka, in kasta oo balooggan uu ku xiran yahay mawduuca Apple, waan sameynaa ma lihid caqiido indho la'aan Shirkadda, haddii aad mar kale fiiriso waxaad arki doontaa inay tahay akhristayaasha kuwa go'aaminaya (oo go'aansaday) guuleystaha isbarbardhiggan, imtixaannada intiisa kale waxay si fudud u calaamadeeyaan tirooyinka, halkan kuma sii tiirsanaanayso midkoodna ra'yi.
Iyo sidaad u fahantay, kani waa uun maqaal, maqaal isbarbardhig ah oo u dhexeeya iPhone 6s iyo Galaxy S7, ma aha wax walba oo ku wareegsan Apple iyo Samsung, laakiin qodobkani waa sidaas.
Waxaa ii haray hamiga hagaha ama tifaftiraha si ay iigu celceliyaan jawaabahayga, waxaan u maleynayaa inay ka dhammaadeen doodaha
Waad salaaman tahay Manuel, waan ka cudurdaaranayaa laakiin ma aanan dareemin wax iiga sheekeeyay aragtidaada, umana maleyneynin inaad filaysay jawaabtayda, inkastoo tan iyo tan aad codsatay, waxaan kuu sheegi doonaa inaan xushmeynayo aragtidaada, waan ku qanacsanahay faallooyinkaaga waana qaatay Waqtiga aan soo bandhigayo doodahaaga, si kastaba ha ahaatee anigu ma wadaagayo, marka hore marka hore sifiican ugama aanan fahmin haba yaraatee, sidoo kale waxaan arkaa waxyaabo sidan oo kale ah oo Android kuu ogolaanaya inaad kafiiriso TV-ga ka fudud kan iOS (taas oo been ah tan iyo markii Apple ay maamusho taas iyada oo leh AppleTV iyo borotokoolkeeda AirPlay illaa waqti hore, xitaa Xiaomi TV waxay taageertaa AirPlay).
Sikastaba, halkan uma joogno inaan ka wada hadalno midka fiican, haddii Android ama iOS, ra'yigeygu uu ka muuqdo maqaalka, aniga ahaan waa laba nidaam oo kala duwan oo hawlgal ah, oo loogu talagalay dadka leh dhadhamada iyo awoodaha kala duwan, aniga shaqsiyan waxaan doorbidaa macruufka, haddii waxaad doorbideysaa Android waa wax aan si buuxda u ixtiraamo. Arimaha dhadhanka, sida xaaladan oo kale, lama dhihi karo lagama maarmaan in wax ay ka fiican yihiin kan kale, gaar ahaan marka labaduba ay si isku mid ah u siman yihiin oo midba midka kale u nuqul yahay (qaar ka badan kuwa kale ayaan u maleynayaa), mid kastaa wuxuu oran doonaa midka uu adeegsado ama kan uu jecelyahay ayaa kafiican
Ma isku dayayo inaan ku soo rogo qof fikrad ah in hal nidaam uu ka fiican yahay kan kale, waxaan si fudud u arkaa in isbarbardhigaagu uusan ku sii jeedin mawduuca barnaamijka software-ka iyo sidoo kale dhinacyada kale, marka hore waxaan ku sheegayaa mirroring, sida iska cad Apple wuxuu awood u leeyahay inuu sameeyo laakiin laakiin dabcan, waa inaad maal gashataa TV-ga Apple halkii aad ka heli laheyd Android, inta badan qalabka dhexdhexaadka iyo dhamaadka-sare waxay awood u leeyihiin inay muraajiciyaan oo ay la wadaagaan wixii ku saabsan nooc kasta oo warbaahin ah TV kasta oo caqli-gal ah, dabcan Apple TV ayaa faa'iido u leh kuwa TV-yada aan sameynin Iyagu waa caqli badan yihiin, sidoo kale Android-ka waxaa jira dhowr qalab oo ay ku jiraan chromecast kaas oo kuu oggolaanaya inaad waxyaabo kale la wadaagto telefishinnada aan caqliga lahayn, oo lagu daro Apple TV-ga oo ka sii dhameystiran shaqooyinka, dhibic ka dhan ah qiimo.
Markaad si qoto dheer ugu dhex gasho barnaamijka adoo haysta aaladda Android nooc kasta ha noqotee, waad ku keydin kartaa faylalka aad ka farxiso ama kuwa keydinta qalabku u oggolaado, waxayna noqon karaan feylasha wixii dheeri ah, wax aan ka dhicin IOS, Taleefan Android ah Waan soo dejisan karaa filim, decompress karaa, waxaanan ka ciyaari karaa tv-ga, wax walba oo taleefanka ka socda, macallimiinta ilaa maanta ma aanan guuleysan waxaan helay kaliya inaan soo dejiyo filimka mar aan isku dayo inaan hoos u dhigo waa suurtagal ma garanayo haddii ay xaddidayaan barnaamijka ama jaahilnimada dhinacayga, xaqiiqda ayaa ah in Android ay tahay mid aad u fudud oo aad u dabacsan marka ay timaado sameynta hawlgalka noocan ah, tusaale ahaan haddii aan doonayo inaan u isticmaalo aaladdayda Android sidii bannaanka kaydinta, ama sida darawal adag oo bannaanka ah, si fiican ayaan u samayn karaa oo keliya aniga oo ku xiraya pc iyo voila Waxaan jiidayaa dhammaan faylasha aan doonayo iyo noocyada kala duwan, wax fudud sida u ciyaarista fiidiyowyada qaarkood bogagga shabakadda, waxaa jira qaar aan anigu kuma ciyaari karo ip-keyga xayeysiiska, iyo sidoo kale shaqooyin kale oo badan oo ku saabsan ogeysiisyada, wadaagista feylka, u qaabeynta, iwm, waa inaan qiraa in Apple ay dhowaan hirgelisay horumarinno kala duwan oo ku saabsan IOS laakiin si fiican u lafa guridda ma haystaan ​​miisaan aad u badan sida xulashooyinka kale ee tartanku horay u bixiyo.
Isfaham daro kale ayaa laxiriira qaybta keydinta, runti Samsung waxay shaacisay in xasuusta SD iyo xasuusta gudaha aan lagu biiri karin gebi ahaan ama hal unug, laakiin taasi micnaheedu maahan in codsiyada lagu rakibo xusuusta aan loo gudbin karin xusuusta gudaha ee SD xasuusta , tani muddo dheer ayey suurtagal ahayd, markaan idhaahdo pass waa in faylasha iyo dhammaan miisaanka uu codsigan ku jiro xusuusta gudaha loo wareejiyo SD, oo laga sii daayo booskaas ku jira xusuusta gudaha, falanqayntaada waxay xaqiijinayaan in iPhone uu ku guuleysto qeybta keydka maxaa yeelay Samsung kaliya waxay kuu xadideysaa 32 GB barnaamijyada, maadaama ay been tahay sababaha aan kor ku soo sheegay, marka lagu daro xaqiiqda oo aanan u arkin inay ku habboon tahay inaan bixiyo ku dhowaad $ 100 mid kasta oo ka mid ah boodka awoodda kaydinta ee iPhone-ka, waxaan u maleynayaa in khadadka guud ay yihiin xitaa kooxo, sidaa darteed, xulashada mid ama tan kale aakhirka waxay ku egtahay arrin dhadhan, raali noqo insi joogitaanka mawduuca laakiin tani waa bog macluumaad laga siinayo dadweynaha inbadan oo bulshadaas ka mid ahna si qoto dheer ugama oga arrimahaas waxayna ku tiirsan yihiin macluumaadka ay bixiyeen bogagga noocan ah si fikrad looga helo aaladda Iibso, Taasi waa sababta aan dhibaatada u qaatay si aan u muujiyo khaladaad iyo qiimeynno qaarkood oo aan xisaabta lagu darin isbarbardhigga, mana ahan inaan jeclahay hal nidaam ama mid kale maadaama aan ahay isticmaale labadaba oo aan adeegsado mid kasta mid ka mid ah hawlgallada gaarka ah, Sikastaba, waan ku qanacsanahay inaad waqtigaaga u hurto inaad iga jawaabto, salaan!
iyadoo xushmad weyn leh in Viva Samsung S7 / S7 gees iyo 100% android LG G5 uusan ka fogeyn. Galax S7 ayaa ka wanaagsan shaki la’aan.
Kaliya dhowr qoraal. Markaad dhahdo:
[…] Qaybta kaamirada ayaa ficil ahaan laga soo qaatay Apple, farsamada Dual Pixel waxay aad ugu egtahay ta Apple soo bandhigtay, Focus Pixels […]
Tiknoolajiyadda "Focus Pixels" ee Apple ayaa ah khayaanad mid ka mid ah oo horeyba caan ugu ahayd ficil kasta oo taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah, PDAF (Wajiga Autofocus), haa, taasi waa waxa dhab ahaan loogu yeero, in Canon lagu hirgeliyey moodellada qaar ee DSLRs aan muraayad lahayn. durba ilaa saddex sano. Sidoo kale maad xusin in Apple uu u adeegsanayo 5% pixels shaqadan, halka Samsung "Dual Pixel Focus" uu u adeegsanayo 100% pixels aaladda. Xaqiiqdii, xawaaraha diiradda ayaa si aad ah uga dhakhso badan S7.
[…] Galaxy S7 waxaa lagu iibiyaa 32 keyd ah iyo suurtagalnimada isticmaalka MicroSD si loo keydiyo feylasha iyo dukumiintiyada, halka iPhone 6s lagu iibiyo 16, 64 iyo 128GB iyada oo aan macquul aheyn in MicroSD la isticmaalo.
Waxaan dhibka u siinayaa iPhone 6s sabab fudud, Samsung ayaa kuu xadideysa 32GB oo keyd ah […]
Aan aragno haddii aan fahmay. 7 GB Galaxy S32 (oo leh ikhtiyaar ah 200 GB micro SD), ayaa kaa xaddidaya. Laakiin 6GB iPhone 16s ah adiga kuguma xadidayo. Taasi waa sababta aad u siiso barta iPhone.
Faallooyin dheeri ah
PS S7 waxaa lagu iibiyaa laba nooc, 32GB iyo 64GB.
Qoraagan .. dijo
Waxaan horeyba u ogaanay sida ilmahan yar yahay, awoodiisa uu xadidayo sababtoo ah waxaad dhahdo ...
Dhinaca kale, qiimuhu waa macluumaad uun marka 7GB S32 uu ka jaban yahay 16GB iPhone ...
Ku jawaab tifaftiraha.
iPhone 6s guuleysta 😀
Ku jawaab Erickson
Galaxy S7 waa kamaradda ugu wanaagsan ee hadda suuqa ku jirta oo loogu talagalay laba pixel super diirad saar deg deg ah taleefannada gacanta ee pixel ka weyn. Tijaabooyinka farsamo ee ku jira internetka waxay muujinayaan inay ka sarreeyaan tartanka iphone-ka wuxuu leeyahay kaamiro wanaagsan laakiin ma cabirmayo ilaa celceliska cabbirka aad ku soo dhawaato ee aad ku soo dhaweyso dexpiseladas ...
Ku jawaab fernando ortiz